July Dream: A founding member
We like to acknowledge you asafounding member of YDC and would like to invite you to receiveaCertificate of Appreciation which is awarded in recognition of your previous commitment and contributions to the development of the Youth Donor Club in Singapore.
The Appreciation Ceremony will be held at the recreation room in the Bloodbank@HSA this Saturday, 27th March from 4.30pm to 7.30pm. This is held in conjunction with the handing over of the 5th to the 6th committee. The election of the Vice President will also be conducted.
I apologise for the late invitation and hope that you can find time to come and meet up with friends, both old and new. You are also most welcome to bring along your partner or friends to the event.
Attire for this event is smart casual. Shorts and slippers are discouraged. (must look good in photo)
Please confirm your attendance with Li Peng at 62200183 or lipeng.chin@redcross.org.sg
Director, Blood Donor Recruitment Programme
11 Outram Road, Bloodbank@HSA
ဇူလိုင်တစ်ယောက် ကြွားတာတွေ များနေပြီလို့လည်း မထင်ကြပါနဲ့။ ကြွားချင်စရာ ကောင်းလောက်အောင် ထူးချွန်နေတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံတကာမှာ မြန်မာပြည်သားတွေ မညံ့ကြောင်း သိစေချင်ရုံလေးပါ။
Posted by JulyDream at 12:08 PM
ကိုယ်ဝါသနာပါပြီး လုပ်တဲ့ အလုပ်တခုမှာ ကိုယ်လုပ်တာ ကိုင်တာတွေကို အသိမှတ်ပြုခံရတယ်တာ ပျော်စရာကောင်းသလို ဆက်လုပ်ဖို့လည်း အားတခုပါပဲ။
ဒါနဲ့ ဗမာတွေ မညံ့ပါဘူး သိပါတယ်။
25 Mar 10, 21:58
ုkom: ဘာမှ မပြောဘဲပြန်သွားလဲစိတ်ပုတ်တယထင်နေဦးမယ။် ဝမ်းသာပါတယ်။
အစ်ကိုရေ ဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျာ ဂငယ်နဲ့တင်မကပါဘူး ဃကြီးနဲ့ကို ဃုဏ်ယူချင်တာပါ။ ဃကြီးက .. ကြီးလေးကြီးမှာ စွမ်းတဲ့အက္ခရာကိုး..။ ဂငယ်ကတော့ နေထွက်တဲ့သဏ္ဍာန်နဲ့ တူတယ်ဗျာ။ ဒီတော့ကာ.. နေထွက်ရာကနေ မွန်းတည့်သည်အထိ တောက်ပဝင်းလက်နိုင်ပါစေဗျား။ ( မနှစ်က အစ်ကို့ကို ညည်းပြသလို သွေးလှူဖို့ အခုထိ အိပ်ရေးဝဝ မအိပ်ရသေးတဲ့ဘဝဆိုတော့ လှူနိုင်သူတွေကို ဆက်လက် ချီးကျူးအားကျနေရုံ..သာ။
နောက်ဆုံးစာကြောင်း အကြိုက်ဆုံးပဲ... မြန်မာနိုင်ငံသားပါလို့ ခံယူထားသမျှလူတွေ ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိနိုင်ရင်..........